Today Latest News!
346. Civilian Lawmakers Counter Military Representatives’ Complaints Against Journalists	-Irrawaddy
#Burma	(00h ago)
.	.	. Lawmakers said military representatives should accept criticism from the media and that the media acts asachannel of communication between the people and the government.
345. “ကနြျော Gay တယောကျ မဟုတျဘူး”လို့ ပွောလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ဒေါငျး	-Irrawaddy
#Entertainment	(01h ago)
.	.	. တက်ကသိုလျကြောငျးသားပုံစံနဲ့ ကာရိုကျတာကို စိတျကူးယဉျခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပျဆောငျ ဒေါငျးဟာ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားဘဝကို မခံစားခဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
344. ပဋိပက္ခဖြစ်စေမယ့် အရေးသားမျိုး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စစ်ဆေးသွားမယ့် Facebook	-Akhayar
#instant_article_ads	(01h ago)
[Zawgyi] ပဋိပက္ခဖြစ်စေမယ့် အရေးသားမျိုး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စစ်ဆေးသွားမယ့် Facebook ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုန်းက Facebook ကို မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့်နေတယ်ဆိုပြီး UK နိုင်ငံရေးသမားတချို့စွပ်စွဲခဲ့သလို Fakebook လို့ နာမည်တပ်ခံရတဲ့အထိ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သိကြပြီးတဲ့အတိုင်း Facebook လို Social Media မျိုးဟာ တိုက်ခိုက်လို့ အရမ်းကောင်းတာမလို့ DCMS အဖွဲ့အစည်း ဖော်ပြထားချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အရေးအခင်းလည်း ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ Facebook အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးခွဲခြားရေး ပဋိပက္ခ အရှုပ်အထွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို UN အနေနဲ့လည်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ပိုမိုပြင်းထန်အောင် တမင်လုံ့ဆော် ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ […]
343. ဂျပန်ကျူးကျော်မှု တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် ၇၃ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ တရုတ်ကျင်းပ	-DVB
#Lead Story	(01h ago)
.	.	. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၇၃ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ဝူဟန်မြို့မှာ တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့[...]
342. IT ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ ခြောက်ခုပေးမည့် ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်	-InternetJournal
#Local	(01h ago)
.	.	. [ Zawgyi ] IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Solution တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ICT Star Group Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ Empowered Office ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲကို သြဂုတ် ၁၀ ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ IT Solution ဝန် ဆောင်မှုတွေမှာ Software Development, Projects Management, Fiber Installation, Facility, Outsourcing နဲ့ IT Solutions & Services စတဲ့အပိုင်း ၆ ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲဒီရုံးခန်းကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာသာမက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ရည်ရွယ်ထားဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ iSGM Company ဟာ Japan နိုင်ငံရဲ့ Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NEC Network & System Integration Corporation, Myanmar နိုင်ငံက Company နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ TM Trading Co., Ltd. နဲ့ Gusto Institute တို့က ပူးပေါင်းတည်ထောင်ပြီးတော့ လက်ရှိမှာဝန်ထမ်း ၂၄၁ ဦးနဲ့ လည်ပတ်လုပ် ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ -အောင်သက်ကို [ Unicode ] IT နဲ့ပတျသကျတဲ့ Solution တှကေို ဝနျဆောငျမှုပေးမယျ့ ICT Star Group Myanmar ကုမ်ပဏီရဲ့ Empowered Office ရုံးခနျးသဈဖှငျ့ပှဲကို သွဂုတျ ၁၀ ရကျမှာပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ IT… Read More
341. နမ်မတူ တိုကျပှဲရှောငျ ၇၀၀ ကြျော စားနပျရိက်ခာလိုအပျနေ	-Irrawaddy
#Politics	(01h ago)
.	.	. ပနျလုံကြေးရှာမှ ဒသေခံမြားသညျ နမ်မတူမွို့နယျ၊ မနျလီကြေးရှာ၊ မနျလီဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ အိမျထောငျစု ၁၀၀ ကြျောမှ ၄၅၀ ဦး၊ ပနျသပွဘေုနျးကွီးကြောငျး၌ ၂၆၀ ဦး (အိမျထောငျစု စာရငျးမသိရသေး) စုစုပေါငျး ၇၁၀ ဦး ခိုလှုံနေ
340. ပေါ့ပ်ဘုရင်မ မက်ဒေါနားရဲ့ အရောင်အသွေးစုံ နှစ် ၆၀ ခရီးအကြောင်း တစေ့တစောင်း (ဓာတ်ပုံ)	-DVB
.	.	. မက်ဒေါနားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ နာမည်ကြီး ပေါ့ပ်စတား အဆိုကျော်၊ မင်းသမီး၊ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာနဲ့ ထုတ်လုပ်သူ စတဲ့အလုပ်တွေနဲ့[...]
339. အိန္ဒိယတွင် နွားမှောင်ခိုသံသယဖြင့် လူတဦး အသတ်ခံရပြီးနောက် ဒေသခံများ စိုးရိမ်	-DVB
.	.	. ဟိန္ဒူအများစုနေထိုင်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာ နွားမှောင်ခိုကူးမှု သံသယနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တဦး သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝ[...]
338. တရုတ်နိုင်ငံတဝန်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်းနှစ်ခုကြောင့် လူသိန်းချီ ထိခိုက်	-DVB
.	.	. တရုတ်နိုင်ငံတဝန်းမှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ မုန်တိုင်းနှစ်ခုကြောင့် လူဦးရေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ၁၆ လုံးမြောက်[...]
337. နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်ဆိုရင် အလှမပျက်စေဖို့ ဒီအလွဲလေးတွေကိုရှောင်ပါ။	-Gandawin
#မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်နည်း	(01h ago)
.	.	. ...
336. ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် TNLA နှင့် RCSS တို့ စစ်ရေးတင်းမာ လျက်ရှိပြီး ရွားလုံးကျွတ် တိမ်းရှောင်မှုများ ရှိနေ	-LadiesNews
335. အိန္ဒိယ ရေကြီးမှု သေဆုံးသူ ၇၂ ဦးထိ ရှိပြီ	-DVB
.	.	. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မိုးသည်းရေကြီးမှုတွေကြောင့် အခုလ ၈ ရက်ကတည်းကဆိုရင် သေဆုံးသူ ၇၂ ဦးအထိ ရှိလာပြီး[...]